Xasan Muudey: “Xildhibaanada Baarlamaanka waxaan ku boorinaya in ay soo dhiciyan xaqa Qalbi Dhagax…” - Latest News Updates
Xasan Muudey: “Xildhibaanada Baarlamaanka waxaan ku boorinaya in ay soo dhiciyan xaqa Qalbi Dhagax…”
Siyaasiga Xasan C/qaadir Muudey, ayaa waxa uu Madaxda Dowladda Somaliya uu ku eedeeyay inay jebiyeen sharuucda dalka iyo caalamkaba uga degsan arrinta ku aadan eedeysanaha la soo eedeeyo.
Xasan C/qaadir Muudey, ayaa si kulul Madaxda Dowladda Somaliya ugu eedeeyay inay jebiyen qodobka 36aad ee Dastuurka KMG ee Somaliya, oo qeexaya inaanan muwaadin Somaliyeed loo gacangelin karin dal shisheeye.
Isagoo la hadlaayay Warbaahinta gudaha, ayuu yiri “Sida sharcigu uu qaba eedeysanaha waa inay eedeymaha ku soo cadeeyan maxkamadaha dalka, waxayna ahayd ka hor intii aan la wareejin C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax), inay maxkamadi cadayso eedeymaha ay Itoobiya u cuskatay dalabkeedii ahaa in lagu soo wareejiyo.”
Waxaa uu tilmaamay in heshiiska caalamiga ahi uu cadaynayo inaanan eedeysanaha loo gacangelin karin dal adeegsada jirdilka, sida Itoobiya oo kale.
“Heshiiska ka dhanka ah jirdilka ma ogolo in qof loo gacangeliyo dowlad isticmaasha jirdilka, sida Itoobiya oo kale. Sida ay cadeeyeen hay’adaha xuquuqda aadanaha Itoobiya waxay ka mid tahay dalalka ugu horeeya dunida ee isticmaala jirdilka.” Ayuu yiri Xasan C/qaadir.
Ina Muudey oo eedeymo dusha kaga tuuray hoggaanka dalka, ayaa yiri “Waxaan ku dhaliilaya Madaxda Qarankeena in muwaadin Somaliyeed ay u gacangeliyeen dal sida Itoobiya oo kale, oo maxaabiista ciqaab adag lagu marsiiyo xabsiyada dalkaasi ku yaala.”
Wuxuu kaloo yiri “Dhibaatadaas iyagoo gaystay ayay hadana noogu dareen inay ka aamusaan khaladkii ay ku kacayn. Marnaba aamusnaan ma qabato qoyska iyo ehelada Qalbi Dhagax iyo guud ahaanba shacabka Somaliyeed. Waxaan ku cambaareynaya sida ay dhegaha uga fureysteen inay ka hadlaan arrintan iyo ku xadgudubka qodob dastuuri ah.”
Muudey, ayaa waxaa uu Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya uu ugu yeeray inay ka dhiidhicyan arrintan, si aanay markale ugu dhiiran inay muwaadin Somaliyeed u gacangeliyan shisheeyaha.
“Xildhibaanada Baarlamaanka waxaan ugu baaqaya inay arrintan dhacday ka dhiidhiyan, si aysan dib dambe u soo noqon. Xildhibaanada waxaan ku boorinaya inaysan noqon kuwo ka aamusa, ayna adkeeyan ku dhaqanka shuruucda. Muwaadinka Somaliyeed ee lagu xadgudbayna inaad xaqiisa u soo dhiciyan.” Ayuu yiri Muudey.